60 Imizuzwana! Yenziwe kwakhona – Ukukopa&Ukuqhawula – Iingcebiso ze-Android cheats
60 Imizuzwana! Yenziwe kwakhona – Ukukopa&Ukuqhawula
IiDolores, UTed, UMary Jane kunye noTimmy babuyela kukujongana ne-apocalypse yenyukliya kule intsha, uhlelo oluhlaziyiweyo lwe-atomic yakudala – 60 Imizuzwana! Yenziwe kwakhona, ebonisa inkxaso yobugcisa obuphezulu, ihlaziywe imizobo ye-2D kunye nokwenziwa ngesandla kwe3D, imenyu entsha esebenzayo, inkqubo ye-UI ephuculweyo, uhlaziyo lobugcisa, kwaye kunjalo… umxholo omtsha!
INDLELA YOMDLALO ENTSHA
Imingeni yokusinda – eyodwa, amabali amafutshane aya kuvavanya izakhono zakho zokusinda!
ukubaleka inkunkuma ngendlela yamabali adlula kwimidlalo emininzi! Ngaba unokubalekela inkunkuma ngesitayela?
INKQUBO ENTSHA YOBUDLELWANE
amabali amaninzi kunye nentsebenziswano ephambeneyo phakathi kwamalungu osapho akwaMcDoodle!
IZANDI EZINTSHA, UBUGCISA KUNYE NOMXHOLO OBONAKALAYO ONGAKUVELEKANGA
ikuvumela ukuba wongeze umbala omncinci kwindawo yakho yokuhlala yokuwa!
Kanye kuphela 60 imizuzwana eseleyo ukuya kwimpembelelo, hamba ugqobhoze endlwini ukhangela amalungu osapho kunye nezinto eziluncedo. Yonke into iya kuba ngokuchasene nawe: ixesha, eyakho ifanitshala, indlu eyahlukileyo ngalo lonke ixesha udlala, kunye nombuzo osisiseko… uzohamba ngantoni ushiye bani ngasemva?
Ukufikelela kwindawo yokuphumla ngexesha, ephila, sisiqalo nje. Nantoni na oyishiyileyo kwaye nabani na omsindisileyo uya kudlala indima ebalulekileyo ekusindeni kwakho. Ibali ngalinye lokusinda liya kwahluka, yonke imihla ikumangalisa ngeziganeko ezingalindelekanga. Ngaba onke la mabali aza kuphela kakuhle? Ixhomekeke kuwe. Ukutya komxhesho kunye namanzi, zisebenzise kakuhle izixhobo zakho, bajongane nokhetho olunzima kwaye bade bangene kwintlango.
Iilwimi: IsiNgesi, IsiFrentshi, IsiTaliyane, Deutsch, IsiSpanish esivela eSpain, IsiTshayina Esenziwe Lula, IsiJaphani, Korean, Polish, Português (Brazil), IsiRashiya, IsiTurkey
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Yenziwe kwakhona, Imizuzwana
← I-Super Hero Driving School – Ukukopa&Ukuqhawula Idle Family Sim – Life Manager Cheats&Ukuqhawula →